Shiinaha Custom boorsadaada-saareyaasha, Shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Boorsada isboortiga > Boorsada biyaha
Xulashada qoyaanka saxda ah waxay badanaa kuxirantahay boorsada dhabarka ah ee aad qorsheyneyso inaad iibsato (1) Si fududaan loo isticmaalo: Dhabarka u dhig dhabarkaaga kuna xir tuubada baaritaanka sida ugu dhow ee afka sida ugu macquulsan dhib la'aan. Waxba maleh waxaad qabaneyso (socodka, baaskiil, fuulitaanka, iwm), looma baahna inaad gaabiso ama aad istaagto. Ilaa iyo inta tuubada biyaha la cabayaa ay meesheeda taallo, way qabsanaysaa, socotaa, socotaa!
Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2003. Ganacsigeena ugu weynwaa naqshadeynta, soosaarka iyo iibinta alaabada boorsada, sida: boorsooyinka laptop-ka, boorsooyinka iskuulka ardayda, boorsooyinka iskuulka, boorsooyinka xafaayada, boorsooyinka banaanka, boorsooyinka isboortiga, rucks, boorsooyinka iskuulka kartoonada iyo alaabada kale. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale ballaarineynaa ganacsiyada kale, sida soosaarka Naqshadeynta: bacaha suunka, boorsooyinka duffel, boorsooyinka gacanta, boorsooyinka qalabka, boorsooyinka qadada, boorsooyinka qoryaha, boorsooyinka taatikada ee militariga, boorsooyinka xayawaanka iyo alaabada kale. Si loo daboolo baahiyaha shaqsiyeed ee macaamiisha, waxaan sidoo kale dhisnay waax ka caawisa macaamiisha inay helaan qaybaha kale ee badeecadaha ee Shiinaha. Shiinaha dhexdiisa, waxaan leenahay silsilad xoog leh oo qaan gaar ah oo kor u kacsan iyo silsilad saadka oo hoos mara Tani waa faa'iidadayada ugu muhiimsan. Faa'iidadan awgeed, waxaan ugu adeegi karnaa dhammaan macaamiisheenna si dhakhso leh, ka wanaagsan oo ka wanaagsan, oo waxaan u siin karnaa macaamiisheenna adeegyo wax-soo-saar tayo sare leh oo tayo sare leh, waxaan sidoo kale macaamiisha ku siin karnaa badeecooyinkeena noocyada asalka ah oo tayo sare leh. Shaqaalaheena 600 iyo 500 mashiinada wax soo saarka ayaa ah hantida ugu weyn. Sideen u ilaashan karnaa booskeena hogaaminta? Waxaan mudnaan siineynaa isku xirka dadka, waxaana muhiimada koowaad siineynaa ilaalinta xuquuqda aadanaha ee shaqaalaha iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha. Aqoon isweydaarsiga 18,000 mitir murabac ah wuxuu noo ogolaanayaa inaan meel dhigno qalab wax soo saar iyo shaqaale wax soo saar badan, isla markaana aan u siino macaamiisha adeegyo ka imaado naqshadeynta wax soo saarka, soosaarka muunada, soosaarka tirada badan, saadka xamuulka, iyo bayaanka kastamka. Haddii aad u baahato inaad habeyso alaabada boorsada ama aad metesho sumadeena, fadlan nala soo xiriir:adamdavis@fofrerbag.com
1. Faa'iidooyinkaBoorsada biyaha
Xulashada qoyaanka saxda ah waxay badanaa kuxirantahay boorsada dhabarka ah ee aad qorsheyneyso inaad iibsato
: Waxba maleh waxaad qabaneyso (socodka, baaskiil, fuulitaanka, iwm), looma baahna inaad gaabiso ama aad istaagto. Ilaa iyo inta tuubada biyaha la cabayaa ay meesheeda taallo, way qabsanaysaa, socotaa, socotaa!
(2) Heerka qoyaanka oo sareeya: Maxaa yeelay way ka fudud tahay oo way fududahay in laga cabbo xirmada huurka, waxaad u badan tahay inaad wax badan cabto. Tan macnaheedu waxa weeye waxaad u baahan tahay in lagu nuugo inta lagu jiro jimicsiga iyo ka dib. Tan macnaheedu waxa weeye in ciyaartoy ahaan aad si fiican u soo bandhigi doonto.
(3) Qof kastaa wuu sameynayaa: dhammaan wada-hawlgalayaasha socdaalka, wada-hawlgalayaasha baaskiil wadista iyo orodyahannada soo noqnoqda ayaa wali isticmaalaya dhalooyin waaweyn oo balaastig ah oo waaweyn (ha ahaadaan kuwo la tuuri karo iyo haddii kaleba), taasoo kaa dhigi doonta inaad ka maseerto. Waxay rabaan inay adiga noqdaan. Waxay iibsan doonaan boorsadooda qoyan waxayna kuugu mahadcelin doonaan oo ay kugu caashaqi doonaan garbahaaga. Haa, malaha maya, laakiin waad ogtahay. Waxaad noqon doontaa midka ugu qabow kooxda. Iyo fuuq wanaagsan.
2. Boorsada biyaha Halbeegyada alaabta (qeexitaannada)
3. Waa maxay huureeye?
(1) Bacda huurka leh waa boorso gaar ah oo loogu talagalay ama bacda dhexda oo qaadi karta kaadi haysta kaadiheeda ay ka buuxdo dareeraha. Kaadi haysta ayaa biyo siisa tuubada, ka dibna waxaa la keenayaa garabkaaga waxayna ku xiraysaa suunka xabadka ee bacda. Natiijadu waa hab cabitaan oo si fudud loo iibsan karo; kaliya adiga oo dhuuqa waalka tuubada, waxaad si fudud harraad ugu qaboojin kartaa, laakiin waxaad weli si ammaan ah gacmahaaga u saari kartaa shaashadda ama kaa caawin kartaa inaad oroddid.
(2) Shaqada ugu weyn ee bacda dib-u-buuxinta biyaha waa wareejinta cabitaannada, laakiin inta badan bacaha wax lagu duubo sidoo kale waxay leeyihiin awood ay ku soo qaadaan dareereyaasha. Heerarka keydinta ee baahiyaha kale (sida cuntada, qalabka iyo taleefannada) aad ayey u kala duwan yihiin. Waad dooran kartaa midka ugu habboon baahidaada. qaado
(3) Faa'iidooyinka ay leedahay isticmaalka bacaha qoyan ayaa aad u muuqda. Waad isku koobi kartaa waxa aad qabanaysid, iska daa gacmahaaga, iskana ilaali inaad qalabka ku qaadatid jeebkaaga ama baaskiil. Wadayaasha bushkuleeti ganaax buuxa oo inta badan dhib ku qaba rakibidda qafis dhalo ah, baakadaha fuuqbaxa ayaa badanaa looga baahan yahay raacitaanka muddada dheer.
4. Maxaan fiiro gaar ah u yeeshaa markaan iibsanayo huureeye?
(1) Awoodda dareeraha: Awoodda kaadiheysta kaadiheysta qaada waa furaha in la tixgeliyo. Cabbirka kaadiheysta ayaa inta badan udhaxeysa 1.5 ilaa 3 litir. Tani waa farqi weyn oo xagga awoodda qaadista ah; haddii aad qorsheyneyso safar hal maalin ah, waxaa habboon in la isku dayo ka weyn. Haddii aad ku adkeysato inaad ku shubto dheecaannada waddooyinka xaafadaha ama meelaha, waxaad yareyn kartaa miisaanka iyo awoodda.
(2) Naqshadaynta kaadiheysta kaadiheysta: Waxaa jira dhowr nooc oo kaadiheysta kaadiheysta ah, iyo bacaha biyaha qaar iskumid iskama dhex mari karaan xirmooyinka. Tusaale ahaan, timaha geela waxay leeyihiin laba naqshadood oo kaadiheysta kaladuwan. Mid waxaa loogu talagalay "dhexda" boorsada qoyan ee suunka, tan kalena waxaa loogu talagalay boorsadeeda qoyan rucksack. Haddii aad rabto inaad doorato boorso cusbooneysiin cusub oo loogu talagalay baakadaha jira, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad beddesho wixii la mid ah. Haddii aad u doorato kiish biyo ah boorso biyo ah oo aan weli ku qalabaysnayn boorso, tixgeli qaabka aagga bacda la dhigayo.
) Boorsooyinkan waxay leeyihiin guddi gaar ah oo dhabarka ah oo isbeddeli kara iyadoo loo eegayo qaabka lafdhabartaada waxayna siisaa dhuuqitaan naxdin leh markii aad soo dhacdo Tani waa hab wanaagsan oo lagu kordhiyo ilaalinta iyada oo aan la kordhin mugga iyo culeyska hubka.
(4) Awoodda xamuulka: Si la mid ah awoodda qaadista dareeraha, awoodda xamuulku waxay sidoo kale kuxirantahay mudada aad isticmaali karto baakadka iyo shuruudaha xulashada. Riwaayad maalmeedka oo dhan, waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato dhar, cunto iyo qalab badan. Gawaarida dhaadheer, awoodda qaadista hubka iyo koofiyadaha jirka ayaa loo baahan karaa marka aad kor u socoto. Boorsooyin badan ayaa loogu talagalay iyada oo tan maskaxda lagu hayo, iyo suumano iyo qaybo ayaa lagu daray si loo ilaaliyo barkimooyinka iyo qalabka kale inta aad fuushan tahay.
(5) Cabbirka iyo taam ahaanta: Inkasta oo xirmada fuuqbaxa aysan lahayn heerka cabbirka dharka, haddana waxaa lagama maarmaan ah in la doorto xirmo fuuq ah oo ku habboon cabbirka jirkaaga. Dhererka suunka, suunka dhexda iyo dhabarka ayaa ku kala duwan cabirka iyo mugga boorsada, iyo dhammaan boorsooyinka waa la hagaajin karaa, sidaa darteed way la jaan qaadi karaan dhammaanba wadayaasha, wadayaasha yaryar waxay doorbidaan boorsooyinka yaryar. Taxanaheena taxanaha ah, waxaan ku siineynaa baakadaha unisex, baakadaha haweenka qaaska ku ah iyo baakadaha carruurta uumiyo.
6. Boorsada biyahabaakadaha iyo gaarsiinta
(2) Cabirka baakadka ee caadiga ah: dherer 37cm X ballac ah 2cm X dherer 19cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 40cm X 20cm X 30cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 3.5Kg.
(5) Miisaanka saafiga ah ee sanduuqa oo dhan: 2.5Kg.
Calaamadaha kulul: Boorsada biyaha, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka